साथीको विवाहमा गएका युवकको यसरी गयो ज्यान , ल’ खे टी यस्तो सम्म गरेका रहेछन (भिडियो सहित)
Homeसमाचारसाथीको विवाहमा गएका युवकको यसरी गयो ज्यान , ल’ खे टी यस्तो सम्म गरेका रहेछन (भिडियो सहित)
March 2, 2021 admin समाचार 6784
दागंमा एक अर्को घ’टना सामाजिक सञ्जालमा चर्चा छ । दागंको घोराही नगरपालिकामा भएको घ’टना सार्वजनिक भएको हो । आफन्तको विवाह मान्न गएका एक २१ वर्षीय राजन चौधरी ज्या’न लिइएको छ । विवाहमा रमाइरहेका राजनलाई अ’चानक ह’ म ला गरिएको थियो । उनी आफ्नो परिवारका एक मात्र छोरा थिए । छोरा गुमाएका बुवा आमा वि ‘छिप्त भएका छन् । उनी माथि ७ जनाको समुह जा’ इ ला गेका थिए ।
विवाहमा सह’भागी भएका अन्यले पनि घट’ना देखेका थिए । तर विवाहमा सहभागी भएर घ’टना देखेकाहरु पनि न्यायको लागि बोल्न नसकेको भन्दै राजनका परिवार आ’ क्रो शित भएका छन् । बुवा आमा र दिदी अहिले बोल्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । घ’टना भएकै बेला राजनको साथीले हामीलाई लखे’टेका छन् भनेर आफ्नो बुवालाई फोन गरेका थिए । त्यो कुरा राजनको बुवालाई पनि ख’बर आयो ।
साथी अर्को एक जना साथीको घरमा लु’केर मैले ज्या’न जोगाएको छु, राजनलाई अझै ल’ खे टी रहेका छन् भनेर फोन गरेपछि राजनको बुवाआमा चार किलो मिटर टाढा रहेको विवाह भएको घरमा पुगे । घरमा पुग्दा विवाह घरमा राजन थिएनन् । अनि उनीहरुले अ’न्त खोज्न थाले । घट’ना गराउने केटाहरुलाई भने उनीहरुले विवाह गरेको घरमै देखेका थिए । जसले घ’टनाबारे जानकारी दिएका थिए उनी पनि सोही विवाह घरमा देखिए ।
वेहुलाका बुवाले घ’टनामा संलग्नहरुलाई संर’क्षण गर्दै तिमीहरु न ‘ड राउन, जे पर्छ म गर्छु, म पनि प्रहरी हुँ । तिमीहरु ड’ रा उनु पर्दैन भन्दै राजनको परिवारका सदस्यलाई चे ‘ता वनी दिएको आमाले बताइन् । राजनको आमाले हामी हामी आफ्नो छोरा खो’ज्न आएको हो, हामीलाई चे ‘ता वनी नदिनु, हाम्रो छोरा ल्या’इदिनु भनेर बिन्ती गरेको आमाले बताएकी छन् । – इताजा खबरबाट
सुनको मूल्यमा आज उच्च अङ्कको गिरावट, कतिमा कारोबार हुँदैछ?
यति राम्री छ महिनाकी छोरी थिइन्, श्रीमानले नै रि’त्तो बनाए सरस्वतीको काख (भिडियो हे’र्नुहोस)
फेरी के भयो चियावालीलाई ? मलाई केही भए कसले जिम्मा लिने भन्दै यसरी धर’धरी रोइन् (भिडियो हे’र्नुस्)
April 9, 2021 admin समाचार 6192
September 15, 2020 admin समाचार 14056
March 12, 2021 admin समाचार 5905
सामाजिक सञ्जा’लमा दुई महिना देखि कञ्चन र अनि’षाको बारेमा निकै चर्चा भएको छ । दुई म’हिनाको उपचारवाट पनि कञ्चन निको हुन सके’नन् । आइतवार उनको नि`धन भएको छ । लामो समय उपचार गराउँदा पनि उनको
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (231008)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (228268)